सेयर बजार १० दिनमा १४४ अंक बढ्यो, अब के हुन्छ ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजार १० दिनमा १४४ अंक बढ्यो, अब के हुन्छ ?
सेयर लगानीकर्ता र विश्लेषकसमेतले अनुमान गरेविपरीत बेमौसममा सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) उकालो लाग्न थालेको छ । अधिकांश कम्पनीले लाभांश बाँडिसकेको र दोस्रो त्रैमास सकिँदै गर्दा बजार उकालो लाग्न थालेपछि अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । बजार घटेका बेला भागेकाहरु फर्किने क्रमसँगै ब्रोकर कार्यालयहरुमा भीड बढ्न थालेको छ ।
नेप्से परिसूचक मंसिर १० गते यो वर्षकै सर्वाधिक कम अंक (११०९.१७) मा झरेको थियो । पुस ११ गते ११७२.६५ अंकसम्म पुग्यो र फेरि केही घट्न थाल्यो । लगानीकर्ताको भागाभाग भयो । कारोबार रकममा निकै ठूलो ह्रास आयो । पुस ३ गते बिहीबार बजार ११४९.६५ अंकमा झर्‍यो । त्यसपछि पुस १७ सम्म नेप्सेले सीधा बाटो यात्रा गर्‍यो । दुई साता सीधा बाटो यात्रा गरेर (विश्राम लिएपछि) बजार उकालो लाग्न थाल्यो । पुस २० गते ११६६.२२ अंकदेखि लगातारजसो बढ्न थालेको बजार जम्मा १० दिन कारोबार हुँदा माघ ३ गते बिहीबार १३१०.२३ अंकमा उक्लिएको छ । नेप्सेमा अहिले पौने दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार भइरहेको छ भने १० कारोबार दिनमा १४४ अंकले बढिसकेको छ । यसबीचमा कुल बजार पुँजीकरण (लगानीकर्ताको सम्पत्ति) करिब दुई खर्बले बढेको छ ।
नेप्से बढ्ने आधार के ?
सेयर घट्ने र बढ्ने विषयलाई अधिकांशले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अभिव्यक्तिसँग जोड्ने गरेका छन् । तर, ती बहानामात्र हुन् । सेयर बजार मन्त्रीका कारण होइन, सरकारले लिने नीति र ब्याजदरमा निर्भर गर्छ । सेयर बजारमा अल्पकाल र दीर्घकालमा सरकारी नीतिका छुट्टाछुट्टै प्रभाव रहन्छन् । अर्थमन्त्रीका कारण बजार घट्यो भन्नेहरुलाई ‘अहिले किन बजार बढिरहेको छ, अर्थमन्त्री त उनै छन् ? भनेर सोध्यो भने दाँत देखाएर खिस्स हाँस्ने विकल्पमात्र रहन्छ ।
अहिले सेयर बजारमा प्रवेश गर्नेहरुले थारो गाईमा लगानी गरेजस्तै हो । लाभांश बाँडिसकेका कम्पनीको सेयर किनेर लगानीकर्ताले तत्काल फाइदा पाउँदैनन् । तर, एउटा अहं प्रश्न के छ भने अहिले बजार प्रवेश गर्नेहरु डुब्दैनन् । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘घुँडासम्म मात्र पानी भएका ठाउँमा जसरी फाल हाने पनि डुबिँदैन ।’ उनको भनाइको तात्पर्य बजार बढ्छ कि बढ्दैन भन्दा पनि विगतको तुलनामा ४० प्रतिशत ह्रास आएका बेला किन्दा कुनै लगानीकर्ताले गुमाउनु पर्दैन भन्ने हो ।
परिसूचक ४० प्रतिशत घट्दा कतिपय कम्पनीको मूल्य ८५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । उदाहरणका लागि एभरेस्ट बैंकको बिहीबारको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६२९ रुपैयाँ छ, २०७३ साउनमा यो कम्पनीको मूल्य ३ हजार ९०० रुपैयाँसम्म थियो । यो ह्रास करिब ८३ प्रतिशतबराबर हो । अपी हाइड्रोपावर जस्ता कतिपय कम्पनीको मूल्य योभन्दा बढी पनि घटेको छ । अर्थात्, कम्पनीहरुको मूल्य अहिले ‘रिस्कलेस’ अवस्थामा छ ।
अर्को तर्क पनि छ । एनआइसी एसिया बैंकको सेयर मूल्य बिहीबार प्रतिकित्ता ४७५ रुपैयाँ छ । मानौं कि मूल्य बढेर ६०० रुपैयाँ पुग्यो भने १२५ रुपैयाँबराबरको जोखिम स्वतः बढ्यो । ‘त्यसकारण पनि बजार प्रवेश गर्ने भनेको घटेका बेला हो तर लगानीकर्ता बजार बढेर माथि पुगेपछि प्रवेश गर्छन् र आम्दानीको ठूलो अवसर गुमाउँछन्,’ विश्लेषक भट्टराई भन्छन् ।
लामो समय ‘प्यानिक’ अवस्थामा रहेको बजार उकालो लाग्न लगानीकर्तालाई कुनै बहाना चाहिएको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीप्रति अनावश्यक आरोप लागिरहेका बेला उनको सम्भावित बहिर्गमनलाई बहाना बनाइयो । यद्यपि, उनको कार्यकाल अझै केही महिना बाँकी नै छ र थपिन पनि सक्छ भन्नेमा सबै स्पष्ट छन् ।
अहिले बजार बढ्नुको मुख्य कारण तरलताको सहजता हो । ब्याजदर र नेप्सेबीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ ।
अहिले बजार बढ्नुको मुख्य कारण तरलताको सहजता हो । ब्याजदर र नेप्सेबीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ । तरलताको स्थिति सहज हुँदै जाँदा ब्याजदर घट्छ । अहिले ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भुवन दाहाल अहिले बैंकहरुमा तरलताको स्थिति सहज रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकमा अहिले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) औसत ७६.५ प्रतिशत छ । ‘यसलाई तरलता स्थिति सहज रहेको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता सहज भएसँगै ब्याजदरमाथिको दबाब कम भएको छ ।’ वाणिज्य बैंकहरुले ३.५ प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार निक्षेपमा औसत ब्याजदर ६.८१ प्रतिशत छ । बचतमा ५.०६ र मुद्दतिमा ९.८२ प्रतिशत ब्याजदर छ । दुई महिनायता ब्याजदर अझ कम भएको छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम भएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि औसत १२.०२ प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्लेषक भट्टराई ब्याजदर घटेकै कारण सेयर बजारले केही गति लिएको बताउँछन् ।
ब्याजदर कम हुँदै जाँदा सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छ । ठूला लगानीकर्ताले ठूलै भोल्युममा सेयर उठाएसँगै बजार बढ्न थाल्यो । त्यसले साना लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न आत्मविश्वास बढायो । यससँगै सेयर बजारले छलाङ मार्दै छ ।
सरकारबाट विकास बजेट खर्चको स्थिति दयनीय भएकाले तरलताको अवस्था दीर्घकालसम्म सहज होला भन्न सकिन्न । केन्द्रसहित सातै प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र प्रदेश सरकारको दाबीअनुसार अबका महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न सक्यो भने तरलता अभाव हुने छैन । ब्याजदर सहज हुने स्थिति रहिरह्यो भने बजार निकै माथि जानसक्ने अनुमान सेयर विश्लेषकहरुको छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि बजार १६ सयसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘अहिले ब्याजदर केही घटेको छ भने लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण आउन लागेको छ, अब लगानीकर्तालाई कम्पनी छनोट गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ ।’
बैंकहरुमा तलरता सहज हुँदै जाँदा ठूलो कर्जामा अझ कम ब्याज पर्छ । बैंकमा तरलता कम भएको र ब्याजदर घटेको स्थितिमा सेयर बजारमा पैसा गएको हुनसक्ने सानिमा बैंकका सिइओ दाहालको ठम्याइ छ । ‘तरलता सहज भइरहे त्यस्तो स्थिति लामै समय रहन सक्छ,’ उनले भने । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले ६५ प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा प्रभाव गरिरहेका छन् ।
पछिल्लाे - सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस
अघिल्लाे - पर्यटकीय क्षेत्रमा नै छैनन् पर्यटक (फोटो फिचर)